Gubadle, Afhayeenka Ciidamada Daraawiishta Puntland: “Muuse Bixiyoow Laascaanood baa inoo ballan ah” (dhegayso+daawo) – Radio Daljir
Gubadle, Afhayeenka Ciidamada Daraawiishta Puntland: “Muuse Bixiyoow Laascaanood baa inoo ballan ah” (dhegayso+daawo)
Janaayo 21, 2018 8:04 g 0
Ciidanka daraawiishta Puntland ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadal shalay ka soo yeeray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, kaas oo ahaa in Somaliland uu xuduudkeeda ku egyahay Garoowe.
Afhayeenka ciidanka daraawiishta Puntland Gaashaanle Sare Maxamuud Maxamed Axmed (Gubadle) oo maanta warfidiyeenka kula hadlay Garoowe ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii shalay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo uu ku eedeeyay shaqsi fudud oo dagaal ooge ah, waxna aan ka baraney wixii dalku dagaal soo marey.
Gubadle ayaa sheegay in aysan isku darajo ahayn Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo Muuse Biixi, wuxuuna carrabka ku dhuftay in ay labo korneyl yihiin isaga iyo Muuse Biixi, ayna tahay sababta uu hadda ugu jawaabayo.
Gaashaanle Sare Gubadle waxa uu hadalkiisa si raaciyey in ay Puntland guud ahaanba gacanta ku dhigi doonto gobalka Sool oo ay dib-u-sooceelin doonto Laascanood.
Halkan kadaawo Muqaalka
Guddoomiyihii Hore Gobalka Banaadir Thaabit oo ka hadlay Xil ka qaadisii lagu sameyaay (dhegayso+Akhriso)